COVID-2020 Taxaddarrada 19 Fasaxa Xagaaga | RayHaber | raillynews
HomeWarqad Hordhac ahCVIDID-2020 Digniinta 19 Fasaxa Xagaaga
11 / 05 / 2020 Warqad Hordhac ah
Waxaan ka shaqeyneynaa shahaadada cusub ee garoomada diyaaradaha-free-ka coronavirus-ka
Iyada oo soo socda xilliga xagaaga ka dib markii uu dillaaco ee Turkey Covidien-19 waxaa lagu sameeyey shaqada lagama maarmaanka u ah dib u soo kabashada ee waaxda dalxiiska. Daraasadahaan gudahood meelaha lagu booqdo Awooda hoteelada gobolka ayaa la kala badin doonaa. Hoyga qoraxda ee ku yaal xeebaha waa la kala badin doonaa sharciyada masaafada bulshada sidoo kale waa in la raaco. Goobaha madadaalada ee goobaha lagu dalxiis tago, cabbiraadaha waa la sarreyn doonaa masaafada bulsheedna waa la ilaalin doonaa marka hore. Xirmooyinka furan ee hoteelada dib dambe looma adeegsan doono.
In Turkey beerta dalxiiska kula soo socda ee xagaaga, mid ka mid ah gobollada ee gobolka Mediterranean ugu caan ah iyo dalxiiska kale warbaahinta ugu habboon waxay bilaabeen inay u diyaar garoobaan qaadashada tallaabooyin in Firdooska Covidien-19 dillaacay kuwa doonaya in ay sameeyaan ka dib markii fasaxa. Kadib kulanno kala duwan oo ay yeesheen dowladda iyo Wasaaradda Dalxiiska, waxaa la soo saaray khariidad waddo gaar ah oo dalxiis ah.
Sababtoo ah dillaacay COVID-19, waxaa la weydiistey inuu xidho jawaannada furan ee hoteelada oo uu sidaas ku sii socdo isagoo qeybtii ka buuxinaya hudheellada. Cudurka faafa dartiis, hoteelada kaliya maahee sidoo kale meheradaha sida xarumaha madadaalada iyo makhaayadaha ayaa u baahan doona inay kala bar ka gaaraan awooda macaamiishooda. Macaamiisha ka soo galaya shirkadaha ganacsiga, waa inay lahaadaan fursado kaladuwan sida isticmaalka maaskarada khaaska ah iyo qolalka baaritaanka. Intaa waxa u dheer, tirada shaqaalaha caafimaadka ayaa la filayaa in la ballaariyo si ay u bixiyaan adeeg 7/24.
Meelaha la booqdo ka dib Fidista COVID-19
Cudurka daacuunka dartiis, labaduba waxay ugu wacan tahay hudheellada inay ku shaqeeyaan kala badh dadkuna ay ka fogaadaan dadka badan, meelaha lagu booqdo Waxay u baahan yihiin inay sameeyaan cilmi-baaris wanaagsan. Gaar ahaan Antalya, luul of gobolka Mediterranean iyo janno dalxiis, Meelaha lagu booqdo Antalya waana mid ka mid ah meelaha ay dadku ku badan yihiin hudheelada loo fadhiisiyo. Sidaa darteed, Meelaha lagu booqdo Antalya Waxaad awoodi doontaa inaad aragto dhismayaal badan oo dabiici ah iyo kuwo taariikhi ah iyo sidoo kale hoteelo ay ku sii jiraan. Kuwa doonaya inay ka fogaadaan dadka badan oo haystaan ​​fasax xasilloon hadda Antalya inay soo booqato goobaha Waxay raadinayaan goobo gaar ah oo ay teendhooyin ka dhistaan ​​gobolka Antalya. Gaar ahaan fayraska dartiis, dadka waxaa laga filayaa inay u jeestaan ​​dabeecado badan. Marka kahor intaanan aadin fasax meelaha lagu booqdo Go'aan fiican ka qaad mawduuca oo hubi in ay tahay meel deggan.
Meelaha lagu booqdo Antalya
Fayraska Corona Taxaddarro dhawr ah awgood, hoteelada waxaa loo oggolaaday inay ku shaqeeyaan kala badh. Markaa, waxaan fursad u helnaa inaan labadeenaba ilaalinno caafimaadkeena oo aan fasax u helno iyadoo la ilaalinayo fogaanta bulshada. Laakiin ka hor intaadan tegin fasax, haddii aad rabto inaad fasax ku qaadato gobolka Mediterranean, Meelaha lagu booqdo Antalya Waxaad go'aan ka gaari kartaa meelaha kugu habboon adiga oo fiirinaya gobolka. Deganaan iyo dabeecad is dhexgalka meelaha lagu booqdo Way fududahay in la helo. Ka sokow jannada dalxiiska Antalya meelaha lagu booqdo waxaana loo yaqaanaa janno dalxiis maxaa yeelay waxay isku xidhantahay dabeecadda. Sidaa darteed Antalya, kuleylka iyo ciidda gobolka Mediterranean, dabeecadeeda iyo taariikhdeeda Meelaha lagu booqdo safka ugu horeeya.
Tallaabooyinka la Qaaday Inta lagu gudajiro Fasaxyada 19 sababtuna tahay Dillaaca COVID-2020
Masaafada bulshada waxaa ilaalin doona iyadoo la xaddiday sariiraha qorraxda
Buffets waa la xiri doonaa
Makhaayadaha lagu raaxeysto makhaayadaha waxay ka shaqeyn doonaan kala badh awoodda
Hoteellada ayaa bixin doona adeegyo daryeel caafimaad 7/24 iyadoo kordhineysa tirada shaqaalaha daryeelka caafimaadka
Xaddidaadda qofka waxaa lagu soo bandhigay safarka doonta
Mamnuucidda duullimaadyada ayaa si tartiib tartiib ah looga saari doonaa
Safarka ku meelgaarka ah wuxuu bilaabmayaa dhamaadka May
Tallaabooyinkan, waxaan arki karnaa in 2020 Dalxiiska ay si tartiib tartiib ah u bilaabatay. Sidaa darteed, waa in fiiro gaar ah la siiyo masaafada bulshada iyo meelaha lagu booqdo waa in laga fogaadaa tirada dadka horay loo sii go'aamiyey. Xitaa haddii aad ku jirtid fasax, waxaad aadi kartaa gobolka Antalya, oo ah gobol fasax ah oo ku xiran dabeecadda, haddii ay suurtagal tahay adoo raacaya masaafada bulshada. Meelaha lagu booqdo Antalya wax kasta oo u dhexeeya taariikhda, qorraxda, ciidda iyo badda waa suurtagal. Ka sokow la-xiriirka dabiiciga, Antalya waxay qarisaa magaalooyin taariikhi ah oo aad u khaas ah iyo waxyaalo waaweyn oo iftiin doona taariikhda.
Xarunta Dhexe ee Cibaadirta
Xadiiqada Akdaag waxay diyaar u tahay fasaxa simistarka
Startepe Diyaar Garowga Sannadka Sannadka
Samulaş Bayram Diyaargaroow
Nadiifinta Tallaabooyinka ayaa Lagu Soo Kordhiyey Magaalada Istambul
Tallaabooyinka Coronavirus ayaa ku kordhay Eskişehir